बजेटमा बढाईएको अन्तशुल्क घटेपछि व्यवसायी खुशी - १६ आश्विन २०७७, NepalTimes
बजेटमा बढाईएको अन्तशुल्क घटेपछि व्यवसायी खुशी
१६ आश्विन २०७७
१६ असोज, काठमाडौँ ।
करका दर र अन्तशुल्क घटाउने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले करका दर र अन्तशुल्क घटाउने निर्णय गरेपछि व्यवसायीहरु उत्साहित हुँदै स्वागत योग्य कदम भनेका छन् ।
सरकारले गरेको करका दर र अन्तशुल्क घटाउने निर्णय बिहीबार नै राजपत्रमा प्रकाशित गई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । खासगरी विद्युतिय सवारी साधनमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत अन्तशुल्क बढाउने निर्णय गरेको थियो । तर बिहीबार फेरी अन्तशुल्क घटाउने निर्णय गरेपछि अटो मोबाइल्स व्यवसायीहरुले पनि स्वागत योग्य भनेका छन् ।
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले विद्युतिय सवारी साधनमा अन्तशुल्क घटाउनु स्वागत योग्य भएको बताए । यस्तै सवारीसाधन खरिदमा न्यूनतम ५० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गर्ने व्यवस्थालाई पनि सरकारले घटाइदिनुपर्ने उनले बताए । सवारी साधनको डाउनपेमेन्टलाई ५० प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशतमा कायम गर्ने व्यवस्था गरिदिन पनि सरकारसँग आग्रह समेत गरे ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले आयातित वस्तुमा लिने अन्तशुल्क र करका दर घटाउँदा सरकारको राजस्व झनै बढने बताए । अन्तशुल्क घटाउँदा सबै सामान वैधानिक माध्यमबाट आउने र आयातको आकार बढने हुँदा राजस्व पनि बढ्ने उनको भनाई छ । त्यस्तै कर घटाउँदा कम मूल्यमा वस्तु विक्रीगर्न सक्ने भएकाले उत्पादन पनि बढ्न जाने र त्यसबाट रोजगारी बढने भएकाले राजस्वमा स्वतः वृद्धि हुने श्रेष्ठले बताए ।
व्यवसायीहरुले आयातित वस्तुको अन्तशुल्क घटाउनु सकारात्मक भए पनि भन्सार प्रक्रियामा सुधारको आवस्यकता रहेको बताएका छन् । खासगरी भ्याट फिर्ता लगायतका विषयमा अझै पनि प्रक्रिया नमिल्दा लागत बढ््न गई उपभोक्तालाई मूल्यमा मार परेको व्यवसायीहरुको तर्क छ । जसका कारण देशमा राजस्व संकलन लक्ष्य अनुसार हुन नसकेको पनि व्यवासयीहरुको भनाई छ ।
सरकारी जग्गा हस्तान्तरणमा रोक
‘राजावादी’ को प्रदर्शन : अटेर भए बल प्रयोग गर्ने चेतावनी, राप्रपा नेता भन्छन्– ‘प्रतिवाद गर्छौं’
प्रचण्डको अडानले दबाबमा परे ओली
कर्णालीमा ५ लाख निरक्षर
ट्रान्सपरेन्सीकाे एसिया प्रतिवेदन आग्रहपूर्ण हाे, तथ्यगत हाेइन : अख्तियार
गाडी आयातमा करोडौं राजस्व ठगी, टेस्लाको एउटै गाडीमा १४ हजार डलर लुकाइयो
गर्भ पतन गराएकाे भन्दै श्रीमान बिरूद्ध उजुरी
महिना दिनभित्रै कक्षा १२ को नतिजा उपलब्ध गराइने
उपत्यकामा साइकल लेनको योजना
ओलीले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार हुन पनि दिन्नँ’ भन्दा प्रचण्ड मुसुमुसु हाँसेपछि…
धनगढीमा दुई प्रहरीको हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका ८ जना कारागार चलान
साझा प्रकाशनमाथि मन्त्री अर्यालको रोष : प्रगति गर्न नसक्नेलाई सरकारले सहयोग गर्दैन
रोजगारीको खोजीमा कहिलेसम्म विदेशीने नेपाली ?
नेकपा विवादको अबको बाटो के होला ?
कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेल रिहा, देशैभरि प्रतिवाद गर्ने चेतावनी
सन्दीप लामिछाने कोरोना संक्रमणमुक्त
नेता पौडेलको गिरफ्तारी सर्वसत्तावादको संकेत, सरकारविरुद्ध देशव्यापी प्रतिराेध गरिन्छ : कांग्रेस सभापति देउवा
२४ घण्टामा थपिए १,४९० संक्रमित, १,५६७ जना डिस्चार्ज
निषेधाज्ञा तोडेपछि नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेल पक्राउ